ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: ရင်ငွေ့နှင့်သွန်းသော ကဗျာတစ်စင်း
စာရေးသူ Unknown အချိန် 9:08 AM
Flower May 4, 2010 at 11:56 AM
ရင်ငွေ့နှင့်သွန်းထားသော ကဗျာလေးကို ရင်နှင့်ခံစားပြီး ဖတ်သွားပါတယ်..
mysterysnow May 4, 2010 at 2:52 PM
မိုးစက်အိမ် May 4, 2010 at 3:18 PM
ရင်ငွေ့ နဲ့ သွန်းပြီး ရာဇ၀င်ဘဲ အက္ခရာ
တင်ထားတယ်တဲ့လားဗျာ . . .
Nge Naing May 4, 2010 at 9:56 PM
ကဗျာလာဖတ်သွားပါတယ်။ သိပ်တော့နားမလည်ဘူး။ ကဗျာဆိုရင် ရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်းမှ နားလည်တယ်။
Cameron May 5, 2010 at 9:20 AM
ညလင်းအိမ် May 5, 2010 at 11:19 AM
ကဗျာတွေက ရာဇ၀င်ထဲ အက္ခရာ တင်ဧ။် တဲ့လား ...
ကိုချမ်းကဗျာလေး ကောင်းတယ် ...
Anonymous May 7, 2010 at 1:33 AM
မောင်သီဟ May 8, 2010 at 10:52 AM
ပျောက်နေပြီး ပေါ်လာတော့လည်း ကဗျာလေးတွေအသက်သွင်းလို့း)
ကိုလူထွေး May 9, 2010 at 1:17 PM
ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ အသက်ပါတယ်...
“ရင်နှင့်သွန်းဆစ်” လို့သုံးရင်ရော အဓိပ္ပာယ်တမျိုးထွက်သွားမလား တွေးနေမိသေးတယ်...